WAR CUSUB: Xubnaha Somaliland u matalaya doorashada dadban oo Muqdisho lagu dhisayo – Xeernews24
WAR CUSUB: Xubnaha Somaliland u matalaya doorashada dadban oo Muqdisho lagu dhisayo
Magaalada Muqdisho waxaa ka socota qabanqaabada iyo isku duba ridka kulan ballaaran oo lagu doonayo in lagu soo xulo xubnaha Somaliland u matalaya doorashada dadban, iyadoo dadaaladaasi ay wadaan madaxda Dowladda Federaalka, odayaal iyo bulshada ka soo jeeda gobolada Waqooyi.
Wasiirka arrimaha gudaha Dowladda Federaalka ee wakhtigu ka idlaaday C/raxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa sheegay in hannaanka doorashooyinka dalka ka dhacaya ay ka dhiman yihiin xubnaha matalaya Somaliland.
“Aqalka sare Soomaaliya inta badan waa la soo gudbiyay waxaana dhiman dadka matalaya Somaliland oo Muqdisho lagu dhisayo” ayuu yiri Wasiir Odowaa oo sheegay in Wasaaradiisu door muhiim ah ka ciyaartay sidii dalka looga hirgelin lahaa nidaamka federaaliga ah.
Hadalkaan ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Somaliland uu si cad u diiday doorashooyinka dadban ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya, isagoona ku tilmaamay in arrintaasi ay horseed kan tahay Dowladda Muqdisho.
Dhinaca kale qoondada Somaliland ay ku leedahay doorashooyinka dadban ayaa horaan waxaa siyaabo kala duwan u dhaleeceeyay xildhibaano, Wasiiro iyo bulshada asal ahaan ka soo jeeda gobolada ay maamusho Dowladda Madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo, iyagoona ku doodaya inay iyagu xaq u leeyihiin saami qeybsi cadaalad ku saleysan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/ODOWAA-1-300x194.jpg 194 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-21 23:14:112016-10-21 23:14:11WAR CUSUB: Xubnaha Somaliland u matalaya doorashada dadban oo Muqdisho lagu dhisayo
Faah-Faahino ka soo Baxaya iska Horimaad Qasaaree geeystay oo galabta ka dhacay... Aroos wacan iyo Ugaas Khayre oo ka dhacay degmadda Afdam goobta loo yaqaan...